Bitumen Tank, Zaridaina Emulsion Bitumen, Boiler-menaka Diathermic - Jianeng
Fonja mangatsiaka silo
Drafitra menaka diathermic
SBS Polymer nohavaozina Bitumen pant
Ny fomba fanafana ny tank asphalt horonantsary novokarinay ny orinasa dia azo zaraina ho: fandroana menaka mafana, fananganana herinaratra ary fanaterana mivantana avy amin'ny mpandoro. Ny volany dia azo hatsangana arakaraka ny takian'ny mpanjifa, ary afaka miditra ao anaty fitaterana fitaterana izy io. Ny karazana fametrahana coil sy fifangaroana samy hafa dia azo atao amina tankina bitumen misy tanjona samy hafa, mba hahafahana mameno ny filàn'ny toe-javatra tena izy. Rehefa ampiasaina ny mitovy tanke tanke tank, dia afaka amboarina ny fantsom-boto manoloana ny tanky mba hanamorana ny fametrahana ny toerana. Ary apetraka daholo ao anaty orinasa ny fantsona rehetra. Ao anatin'ny toe-javatra mahazatra, tsy mila fanovana amin'ny asa ianao, mba hahafahantsika mametraka fiarovana ny tsy fivadibadika fantsona. Raha mila ny fanalefahana lasantsy flue ny tanke bitumen, dia azo hatsangana araka ny fangatahan'ny mpanjifa.
Hianatra bebe kokoa aminay
Tombo bitika lava
Ny fomba fanafana ny tank asphalt vertikal novokarinay ny orinasa dia azo zaraina ho: famindrana menaka hafanana sy fanaterana herinaratra. Ny volany dia azo hatsangana hatramin'ny 20 m³ mankany 2000 m3 araka ny takian'ny mpanjifa. Ny karazan-jiro famonoana samy hafa sy ny fitaovana mifangaro dia azo aorina ho an'ny fitoeran'entina bitumen miaraka amina tanjona samihafa mba ahafahana mameno ny fepetra takian'ny tena fiasa. Ny tanki aspiraly mitsangana dia azo apetraka miaraka amin'ny fampidirana haavo elektronika arakaraka ny takian'ny mpanjifa mba hahatsapa ny fanaraha-maso mandeha ho azy ny haavon'ny rano avo sy ambany. Raha mila ny fanalefahana lasantsy flue ny tanke bitumen, dia azo hatsangana araka ny fangatahan'ny mpanjifa.
Tambajom-bidy bitika milina
Ny tanky bitumen type boatin'ny vokarin'ny orinasa anay dia mety amin'ny fitahirizana sy fitaterana bitumen. Izy io dia azo alefa mivantana an-dranomasina arakaraka ny maodely fitaterana fitaterana entana, miaraka amina haavon'ny haavon'ny 55 cubic ary afaka mamolavola sy apetraka miaraka amin'ny agitator. Ny tanky karazana bitumen dia mety tsara amin'ny fifindrana sy fitaterana aspirasy. Ny kamiao bitika karazana ao anaty tavoahangy dia azo atao amin'ny hafanana mitarika fandroana menaka, famatsiana herinaratra na fananganana mivantana ataon'ny mpandoro. Rehefa ampiasaina miaraka mandritra ny fotoana mitovy ny milina maro, ny fantsom-boto manoloana ny tanky dia azo atao ny mametraka sy mametraka mba hahatonga ny tankina tanteraka ho mora ampiasaina rehefa tsy mikapoka eo amin'ny tranokala.
Ny fanapahana bitumen vokarin'ny orinasa anay dia mora miasa sy mametraka. Mizara roa ny tanky, ny lavany dia misy coil fanorana, ny rafi-hydraulic dia manosika ny paosy bitety tsirairay, ary miora amin'ny fantsom-baravarana ny bitety. Ny menaka hafanana ambany dia hafanaina mba hanohizan'ny lelavola ny bitumen, ary avy eo dia ariana amin'ny fampiasana azy. Ny decumen bitumen dia azo ampidirina ao anaty fitoeram-pitaterana. Ny orinasanay ihany koa dia manamboatra fitaovana mihena (bag), cantilever crane hoisting, fandidiana tsotra, fahombiazana ambony.
Ny silo fitehirizana mafana avy amin'ny orinasanay dia mizara ho karazana miaro ny tontolo iainana sy ny karazana mahazatra. Afaka mifanaraka amin'ny zavamaniry mifangaro asfalt 80t / h-480t / h, ary ny hazavana dia azo zatra ihany koa arakaraka ny takian'ny mpanjifa. Ny haavon'ny 160 taonina sy ambany dia afaka miditra amin'ny fitaterana entana. Ny orinasanay dia nanatsara ny fizotran'ny famokarana silo fitehirizana mafana nandritra ny taona maro, miaraka amin'ny fampisehoana azo antoka. Mameno tsara ny fepetra takiana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana silo ny fitehirizana mafana amin'ny tontolo iainana.
Zavamaniry bitumen Emulsion
Ny zava-maniry fitrandrahana bitumen novokarinay ny orinasa dia manana ny firafitry ny solika iray, ny fitoeran-drano mafana iray, ny rano mifangaro roa mifangaro, fitoeran-tsolika iray, fitoeran-jaza bitety, vinaingala bitety iray (ho an'ny fampiasana tetezamita), fantsom-pifandraisana hafainganam-pandeha azo ampiharina, iray boaty emulsion hafainganam-pandeha azo zahana. , fikosoham-bary iray, fanamafisana baomba bitety iray ary efitrano fanaraha-maso elektrika iray. Ary koa ny fantsom-pampidiran-tsolika hafanana mifandraika, fantsom-pifindrana bitumen, fantsona fifindrana emulsion. Ny zava-maniry emulsion Bitumen dia zaraina ho karazana roa: feno-mandeha sy semi-mandeha ho azy. Ireo izay mandeha ho azy tanteraka dia nanalefaka ny emulsifier, ary tamin'ny alàlan'ny fomba metering manintona, nizara ho azy avy hatrany ny emulsion sy ny bitumen tao amin'ny milina. Tsotra ny fizotran'izany, mora apetraka, mora mianatra sy mahatakatra.
Ny panty bitumen modely SBS Polymer novokarinay dia manamafy ny famolavolana finday, izay mety tsara amin'ny fametrahana sy ny fanesorana. Ny tanke mifangaro dia miaraka amin'ny agitator fanaparitahana haingam-pandeha avo lenta mba hisorohana ny tsy fahampian'ny famenon'ny sbs sy bitumen. Raha tsy misy ny famelezana dia mety ho vokarina amin'ny fikosoham-bary raha manome sakafo. Ny pataloha bitumen modely SBS Polymer dia mizara roa: feno-mandeha sy semi-automatique. Ny zavamaniry PMB mandeha ho azy dia norefesina amin'ny alàlan'ny fandrefesana ary ampitoviana amin'ny sbs sy bitety. Ny rafitra fanaraha-maso ny informatika dia afaka manara-maso ny toe-pamokarana amin'ny fotoana tena.
Ny lavenona entin'ny menaka hafanana mafana famonoana menaka vokarin'ny orinasa dia mizara ho karazana mahazatra sy amin'ny rivotra mafana. Ny kitay dia mety ho menaka maivana, gazy voajanahary na menaka oliva. Ny boiler an'habakabaka mafana dia mampiasa ny sisa tavela amin'ny entona flue handrehitra ny rivotra noho ny fahamaizana, izay mety hampihena ny mari-pana amin'ny entona fandrehitra, noho izany dia mety ho 7% eo ny hafanana avy amin'ny entona mandatsa-dranomaso, noho izany ny fahombiazan'ny boiler dia eo amin'ny 90%. %.
Wuxi Jianeng dia naorina tamin'ny 1999. Manana tanimbary 24000 metatra toradroa izy io, 38.28 tapitrisa yuan renivohitra voasoratra anarana, teknisianina 20 ary mpiasa 100.
Hianatra bebe kokoa
Wuxi Jianeng dia manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana fitaovana fanohanana ho an'ny zavamaniry mifangaro asfalt. Ny mpanjifa kaoperativa maharitra dia misy ny LINTEC, AMMANN, NFLG, XCMG, MARINI, D&G, NIKKO ary Tanaka.
Wuxi Jianeng dia efa nandrafitra ny famolavolana milina maotera sy famokarana nandritra ny roapolo taona mahery. Miaraka amin'ny fikatsahana ny fanatontosana ny vokatra dia nahazo marobe famoronana sy pataloha modely Utility, izay nahazoana fiderana amin'ny indostria.
Ny tranga misy anay
Tambajom-bozaka matevina ho an'ny XCMG
Tambajotra bitumen horohorontany ho an'ny NFLG
Fonja mangatsiaka silo ho an'ny AMMANN
Tambajom-bidy somary matevina ho an'ny AMMANN
Fonja mangatsiaka silo ho an'i Lintec
Tambajom-bidy bitika horohorontany ho an'ny AMMANN
Tambajotra lava mifono vovoka ho an'ny D&G
Tambajotra bitumen manidina ho an'ny D&G 2
Ny vaovao ataonay
MOMBA NY SYOMPOANA
Hot Products 、Sitemap 、DIEM Mobile
Bins fitahirizana Bolt, Mobile tara Batching Station Lby1000 (80t / H) , godorao mampitsahatra Equipment , tara mampitsahatra Equipment , Small Gold mampitsahatra lafaoro , Drumn Melting Unit"、rehetra Products